Wadooyinka tareenka ugu fiican Yurub | Safarka Absolut
The jidadka tareenka ugu fiican Yurub
Safarka Absolut | | kuwa kale
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in diyaaraddu ay weli tahay tan ugu badan ee gaadiidka ay adeegsadaan dadka intiisa badan, haddana runta ayaa ah in tareenku uu ku guuleystey inuu si tartiib tartiib ah waddadiisa ugu maro safarada safarka, gaar ahaan Yurub. Tan waxaa lagu muujiyey kaararka tareenka ee kala duwan oo soo muuqday, kaas oo u oggolaanaya u kala gooshi dalal kala duwan si fudud Dhinaca kale, ku safridda tareenka Yurub uma baahna inay qaali noqoto, dhab ahaantii waa suurtagal in la helo heshiisyada ugu fiican ee lala yeesho Omio oo aad gasho tacabir. Waana fursadaha uu tareenku bixiyo markuu safrayo inay yihiin kuwo gaar ah, helitaanka meelo aan macquul ahayn oo aan macquul ahayn duruufo kale.
Si kastaba ha noqotee, helitaanka muuqaal qurxoon iyo qiimaheeda mararka qaar ka jaban kaliya maahan kuwa keliya Faa'iidooyinka habkan gaadiid laakiin taasi waxay bixisaa raaxo weyn markaad safreyso iyo, dabcan, isku xira inta badan magaalooyinka waaweyn. Kan dambe wuxuu horseedaa marinno fara badan oo Yurub oo dhan ah, waxayna kuxirantahay dhadhanka iyo danaha qofka safarka ah. Intaas waxaa sii dheer, kuwa ugu caansan badanaa waa kuwa isku xira caasimadaha Yurub ama magaalooyinka ugu caansan qaaradda, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa badan oo doorta jidadka tareenka ee kuu oggolaanaya inaad ku safarto hal waddan waqti gaaban oo aan waxba ka maqnayn.
Wadooyinkaas waxaa ka mid ah, dhowr istaag oo muhiim u noqday haddii aan waligeen go'aansano inaan safar tareen ah ku qaadno Yurub. Isbaanishka, mid ka mid ah marinnadaasi waa midka socda Transcantábrico ku biirista León ee Santiago de Compostela. Muddo sideed maalmood ah, magaalooyin kala duwan oo ku yaal Xeebta Cantabrian ayaa la booqdaa, iyagoo ku raaxeysta dhaqanka iyo gastronomy-ka wanaagsan ee aagga. Iskotland qurxoon dalxiis aad u qaas ah ayaa ku yaalo kuwa jecel saaxirka da'da yar Harry Potter. Khad tareenka wuxuu isku xirayaa Glasgow iyo Mallaig oo bixiya muuqaallo riyooyin u eg oo caan ka ah Glenfinnan Viaduct iyo harooyinka Elit iyo Shiel.
Jarmalka dhexdiisa waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah jidadka ugu da'da weyn adduunka: keynta madow. Khadkani wuxuu isku xiraa magaalooyinka Offenburg iyo Constance maaddaama ay soo dhex marayso qayb ka mid ah sixirka Madow, oo ay ka joogsaneyso meelo barakaysan iyo tuulooyin yaryar oo buur ah. Maaddaama aad halkan joogtid, wax dhib ah kuma lahan inaad ku sharraxdo jid socdaal ah magaalooyinka ugu muhiimsan ka yimid dalka. Laakiin haddii aan raadineyno wado lama ilaawaan ah, taasi waa tii ay qaadeen Bernina Express iyada oo loo marayo Switzerland iyo Talyaaniga. Wadadani waxay mareysaa 55 tunnel, 196 buundooyin, magaalada ugu faca weyn Switzerland iyo magaalooyin yar yar oo Talyaani Lombardy ah. Taasina waa quruxdeeda in waddada loo aqoonsaday inay tahay Goob Hidaha Adduunka UNESCO.
Holland waa waddan kale oo leh waddo qurux badan, gaar ahaan xilliga guga. Telefoonka Jidka Ubax wuxuu ka socdaa Haarlem ilaa Leiden dhex maraya beeraha quruxda badan ee midabada kala duwan leh. Si kastaba ha noqotee, kuwa doonaya inay ku sii dhawaadaan gurigooda, marwalba waa macquul in la doorto in la arko caasimado sida Paris, London, Brussels ama Berlin. Kuwani si aad u wanaagsan ayaa la isugu wargeliyaa midba midka kale, sidaa darteed u kala guuristooda dhib ma noqon doonto. Ugu dambeyntii, xusuusnow in jidadkan sidoo kale lagu sameyn karo meel ka baxsan Yurub, safarka tareenka ee Japan, tusaale ahaan, iyada oo loo marayo marinnada gaarka ah ee waddan kasta kuu oggolaanaya inaad si fudud oo dhaqso leh ugu dhex wareegto waddanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » The jidadka tareenka ugu fiican Yurub
Sidee looga warwareegaa Paris